Tongava mpiara-miasa - IntoKildare
Kildare Programme Partner momba ny fizahantany
Tianay ny manampy ny orinasanao hiroborobo amin'ny sehatry ny fizahan-tany mandroso sy mifaninana. Amin'ny maha mpiara-miasa amin'i Into Kildare anao, ny orinasanao dia hahazo tombony amin'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra mpanjifa eo an-toerana, nasionaly ary manerantany.
Tombony azo amin'ny fiaraha-miasa
County Kildare, voarohirohy amin'ny tantara manankarena ao amin'ny faritra Atsinanana Irlandy, dia manome traikefa nahafinaritra sy samihafa ho an'ireo mpitsidika. Ny programa mpiara-miasa aminay dia manome ny fidiranao marika amin'ny mpihaino marobe amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitray ara-barotra sy ny fahafahan'ny tambajotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpanohana eo amin'ny indostria.
Fa maninona ianao no tokony hiditra?
Eto izahay mba hanampy:
Miaraka isika, matanjaka kokoa. Amin'ny maha mpiara-miasa amin'i Into Kildare anao dia mandray soa ianao avy amin'ny paikady marketing fizahantany voarindra ary mahazo fidirana amin'ny sehatra marketing mahatratra mpihaino nasionaly sy iraisam-pirenena. Amin'ny maha fikambanana tsy mitady tombom-barotra, ny sarany rehetra dia ampidirina amin'ny fampiroboroboana sy fivarotana ny County.
Ny lisitra ao amin'ny tranokala IntoKildare.ie ary navoaka am-pahavitrihana tamin'ny alàlan'ny fantsom-piarahamonina mavitrika dia midika fa mpanaraka mihoatra ny 35,000 no mahare momba ny orinasanao
Fampisehoana ny asanao ao amin'ny bokikely fizahan-tany fizahan-tany County Kildare natokana ho an'ny firenena, iraisam-pirenena ary an-tserasera
Ny fisian'ny fiantohana ara-barotra, fampielezana haino aman-jery manerana ny fantsom-pirinty, radio sy nomerika ary taratasim-baovao amin'ny tahiry mpanjifa tsy mitsaha-mitombo
Fahafahana mifandray amin'i Digital Officer anay hampiroborobo ny tolotra fizahantany anao
Fanasana amin'ny hetsika tambajotram-pifandraisana ao Kildare, hetsika ara-barotra ary fiofanana hahazoana fahalalana avy amin'ny manam-pahaizana ary hihaona amin'ireo mpiara-miombon'antoka hafa
Fahazoana ekipa fizahan-tany natokana ho an'ny torohevitra, fanampiana ary fitarihana
Fahitana amin'ny fampirantiana lehibe nasionaly sy iraisam-pirenena ary fampisehoana mpanjifa
Ampidirina amin'ny làlana fitsangatsanganana ho an'ny asa fanaovan-gazety, varotra, bilaogera ary mpanoratra famindra
Fidirana aloha sy taha ahazoana tombony ho an'ny Taste of Kildare
Na inona haben'ny orinasanao dia afaka manolotra ambaratonga fiaraha-miasa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao i Into Kildare.
Ny lisitry ny Directory Kildare
Ny fisian'ny intokildare.ie dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao amin'ny fampifandraisana anao amin'ireo olona mihevitra ny hitsidika an'i County Kildare sy Irlandy. Ity dia hilaza amin'ny mpitsidika ny toerana misy anao sy ny zavatra ataonao.
Mamorona ny lisitrao
Ny fahazoana miasa tsara ny lisitra ataonao dia lakilen'ny fampandehanana referrer amin'ny orinasanao, noho izany dia ilaina ny maka fotoana hametrahana azy amin'ny fampahalalana betsaka araka izay azo atao.
Ampio ny fampahalalana momba ny orinasao. Anisan'izany ny anaranao, ny mombamomba anao, ny rohy momba ny tranokala, ny rohy media sosialy, ny fampahalalana momba ny TripAdvisor, ny toerana misy anao ary ny sarinao.
Raha vantany vao nahary ny lisitra nataonao ianao, dia halefa any amin'ny ekipa Into Kildare hahazoana antoka fa tafiditra ao ireo fampahalalana ilaina rehetra. Raha vantany vao vita dia hiseho ao amin'ny intokildare.ie ny lisitra nankatoavinao.
Fanovana ny mombamomba anao sy fitazonana ny kaontinao hiasa
Zava-dehibe ny manamarina tsy tapaka ny lisitra Into Kildare anao hahazoana antoka fa vaovao ny vaovao. Mangataka amin'ny orinasa rehetra izahay mba hiditra ao amin'ny kaontiny farafahakeliny iray isaky ny 12 volana mba hihazonana ny lisitra ho mihetsika ao amin'ny tranonkala.
Momba an'i Into Kildare
Into Kildare no birao fizahan-tany ofisialin'ny County Kildare. Manohana ny Kildare County Council, Into Kildare dia miara-miasa amin'ny mpiray antoka aminy ho feon'ny fizahan-tany misolo tena ny orinasa 100 hampitombo ny isan'ny mpitsidika ary hampivelatra an'i Kildare ho toerana fitsidihan'ny mpitsidika.
Ny ekipa natokanay dia eto hanampy anao amin'ny fanomezana fampahalalana ho an'ny mpitsidika, ary koa ny famaliana ireo fangatahana haino aman-jery sy PR.